ऐरीको अलराउण्ड प्रदर्शनले पिएनजीमाथि नेपालको सानदार जित !! – Nepal
नेपालले आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप छनोटअन्तर्गत प्लेअफमा पपुवा न्युगिनी (पिएनजी) लाई ६ विकेटले हराउँदै एक दिवसीय मान्यताका लागि बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गरेको छ।
पिएनजीले दिएको १ सय १५ रनको लक्ष्य नेपालले ४ विकेटको क्षतिमा २३ ओभर भित्रै पार गर्‍यो।
पिएनजी विरुद्धको जितमा दीपेन्द्रसिंह ऐरीले नटआउट ५० रन जोडे। उनले ५८ बलमा ४ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे। उनले २३ ओभरको अन्तिम बलमा छक्का प्रहार गर्दै टिमलाई जिताएका थिए। यस्तै रोहितकुमार पौडेलले नटआउट रहेर ३ रन जोडे।
ऐरीसँग ६७ रनको साझेदारी गरेका आरिफ शेखले २६ रनको योगदान दिए। आरिफ र दीपेन्द्रबीच चौथो विकेटका लागि ६७ रनको साझेदारी गरेका थिए।
सदाझै नेपालको सुरुवात खराब रह्यो। तेस्रो ओभरमा दुबै ओपनर गुमाएको नेपाललाई पारस खड्काले केही उकासे। ओपनरद्वय ज्ञानेन्द्र मल्ल १ रन तथा अनिल साह ९ रनमा पेवेलियन फर्किएका थिए।
कप्तान पारस खड्का सातौं ओभरमा २० रन बनाएर आउट भएपछि नेपाल दबाबमा परेको थियो। तर त्यसपछि ऐरी र शेखले सम्हालिएर खेल्दै नेपाललाई विजयी बनाए।
यसअघि जिम्बावेको हरारेस्थित हरारियन स्पोर्ट्स क्लबमा नेपालले टस जितेर पहिले फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेपछि ब्याटिङ गरेको पिएनजी २७.२ ओभरमा १ सय १४ रनमा अलआउट भयो।
नेपालका लागि सन्दीप लामिछाने र दीपेन्द्रसिंह ऐरीले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै समान ४-४ विकेट लिए। करण केसी र सोमपाल कामीले १–१ विकेट हात पारे।
हेर्नुहोस् ५० लाख खर्चिएको सार्वजनिक शौचालयको हालत , न हेल्मेट न परमीट भारतीय प्रहरीको सान !
जनवरी 23, 2019 admin
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ३३० औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा निम्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छः १. ५० लाखको शौचालय प्रयोग नहुदै खण्डहर बन्यो चितवन । पुर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिकामा करीब ५० लाखको लागतमा निमार्ण भएको […]
मार्च 12, 2018 मार्च 12, 2018 admin
२८ फागुन, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा एउटा मात्रै धावनमार्ग (रनवे) छ । सो रनवेका दुईवटा ‘हेडिङ’ अर्थात मुखहरु छन् । संसारभरिका जुनसुकै एयरपोर्टमा पनि एउटा रनवेका दुईवटा ‘हेडिङ’ हुन्छन् । र, दुबै हेडिङबाट विमान उडान वा अवतरण गर्न सकिन्छ । यसअर्थमा नेपालको विमानस्थलमा पनि दुबैतिरबाट अवतरण गर्न पाइन्छ, एउटा मात्रै मुखबाट अवतरण हुनुपर्छ भन्ने […]
एकदिवसीय मान्यता पाए नेपाललाई के फाइदा त !!